Buy တင်​သားအလှ ပုံ​ဖော်​စက် in ရန်ကုန် (18,500 Ks) on ipivi
- တင်​သားလုံးလုံး​လေးနဲ့ ကိတ်​ချင်​လား...?
- ကျစ်​ကျစ်​လစ်​လစ်​ တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ လှချင်​လား...?
- တင်​ပါးမရှိလို့ ဘာဝတ်​ဝတ်​ပုံမလာဖြစ်​​နေလား...?
- တင်သားမရှိလို့ ပြားချပ်နေပါသလား...?
ကိတ်ချင်ရုံဖြင့် Electric Shake ပုံသွင်းစက်လေးကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုပေးရုံဖြင့် လအနည်းငယ်
Electric Shake စက်လေးပါရှင်။
အိမ်​​ထောင်​ရှင်​များ၊ က​လေး​မွေးပြီး အလှပျက်​​နေသူများ၊ တင်​ပြားသူ တင်​မရှိသူ တင်​သား​လျှောကျသူများလှပ လုံးဝန်း ပင့်​တင်​​ပေး​ပေးပါတယ်။
အကိတ်​လွန်​ပြီး ပုံမကျသူများလည်း ကျစ်​လစ်​လှပ​စေပါတယ်​နော်။
ဆေးလည်း မလူးချင် ဆေးလည်း မသောက်ချင်တဲ့ချစ်လေးတို့အတွက် ဒီစက်လေးရှိရုံဖြင့် လှပတဲ့အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီလို့်
မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် အသုံးပြုပေးရုံပါပဲနော်။
နေ့စဉ်ပုံမှန် အသုံးပြုရုံနှင့် ထမီဘဲဝတ်ဝတ်
ဘောင်းဘီဘဲဝတ်ဝတ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့် ရစေမှာပါ...
မီးပလပ်​​ပေါက်​ ထိုးစရာမလိုဘဲ AAA ဓာတ်​ခဲ
အသေး၂ လုံး ထည့်​သုံးရတာဖြစ်​လို့